Bogga hore – Achieve
This post is also available in: English Español Hmoob
Achieve – Xarunta Horumarinta Xirfadaha ee MN, waxaan ku faraxsanahay inaan ku taageerno – xubin qiimo badan leh oo ka mid ah Daryeelka Carruurta ee Carruurta iyo Waxbarashada Shaqaalaha. Waxaan siinaa macmiilka adeeg tayo leh, taageero, iyo illaha dhaqaatiirta iyo tababarayaasha Daryeelka Carruurnimada hore iyo Waxbarashada. Waxaan taageernaa oo waan ku aaminsannahay – Adiga!
Marka Aad Gaartid,
Minnesota way Guuleysataa.
Helitaanka Wadadaada Guusha
Waxaan aqoonsanaa tamarta iyo waqtiga aad ku isticmaashay kobcinta horumarinta ugu wanaagsan ee carruurta. Aad kuu adeegno! Waxaan bixinaa helitaan sahlan ee adeegyada, illaha, iyo taageerada. Waad nagu xisaabtami kartaa, waxaan halkaana u joognaa inaan kugu caawino gaarista!
Halkaan ku Bilow
Waxaan aqoonsanaa tamarta iyo waqtiga aad ku isticmaashay kobcinta horumarinta ugu wanaagsan ee carruurta. Aad kuu adeegno! Waxaan bixinaa helitaan sahlan ee adeegyada, illaha, iyo taageerada. Waad nagu xisaabtami kartaa; waxaan halkaan ujoognaa in aan kugu caawino gaarista!
Waxaan taageernaa shabakada Minnesota ee tababarayaasha aadka u cilmiyeysan. Isku kalsoonow! Waxaad marwalba haysataa helitaanka horumarinta xirfada tayeysan iyo fursadaha waxbarashada. Oo lala kaashanayo Tababaraheena La Ansixisay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu caawino gaarista kobaca!
Xiriirka Ku saleysan Horumarinta Xirfada (RBPD)
Waan aqoonsannahay qiimaha midka mid ah jaheynta hormarinta xirfada. Takhasusyada RBPD waxay bixiyaan fursada badan ee xiriirka ku saleysan waxbarashada, oo ay ku jiraan jaheynta, tababarida, iyo la talinta. Iyo tallada qubaraha ee Takhasuskeena RBPD la ansixiyay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu taageerno inaad gaartid hadafyadaada shaqada.
Waxaan ku caawinaa Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfada siinta hormarinta xirfada oo tayo leh iyo fursadaha waxbarashada. Hay’adaha Maalgeliyaha ee PD waxay ka ciyaaraan dowr muhiim ah ee hubinta helitaankaaga ee tababaro tayeysan, aqoon iswaydaarsiyada, shirarka, iyo machadyada. Iyada oo o ay la jiraan fursadaha waxbarashada kala duwan ee la heli karo, waa gaari kartaa hadafyadaaada hormarinta xirfada!
Waqtiga Ka baarandaga Codsiga
Waxaan hadeer ka baaran dageynaa qoraalada la helay taariikhaha hoose.
Xiiseynayo waxbarashada wax badan ee ku saabsan nidaamka?
Waqtiga Ka baarandagida
Wada shaqeynta lagu taageerayo waxbarashada hore.